Ku rakib Android 1.6 ama Donut Rasmi ah Htc G1 xidid la'aan | Androidsis
antocara | | Xididka Android, HTC, Tababarada, Noocyada Android
T-Mobile ayaa bilaabay inuu ku soo bandhigo OTA iyada Android 1.6 ama cusbooneysiinta Donut ilaa boosteejooyinkooda Htc G1 gudaha Mareykanka Haddii aad shirkad ka haysato terminal adiga oo aan xidid iyo nooca asalka ah ee cupcakeUma baahnid inaad sugto inta cusboonaysiinta ay ka imaaneyso OTA, waad ku rakibi kartaa gacanta. Tallaabooyinka la raacayo waa kuwan:
Waa inaan kala soo baxno feylkaan.
Nuqul feylkii hore asalka kaarka SD-ka oo dib ugu cusbooneysii cusbooneysiinta.zip.
Ku soo celi taleefanka qaabka soo kabashada adigoo riixaya HOME + Power.
Markaad aragto meel lala yaaban yahay oo ku jirta saddexagalka oo shaashadda ka muuqda, riix furayaasha Alt + L isla markaa isla markaana waxaa lagu tusi doonaa shaashad leh xulashooyin taxane ah.
Taabo Alt + S oo cusbooneysiinta terminal-ka ayaa bilaabmi doonta.
Mar alla markii ay dhammaato dib ayey u bilaabmi doontaa ama haddii aadan adigu dib u bilaabin.
Mar alla markii aan dib u bilowno waxaan tagnaa Menu-ka - Dejinta - Ku saabsan telefoonka iyo dhammaadka xulashooyinka oo dhan waxaan arki doonnaa DRC83 oo ah Cusbooneysiinta Donut.
Xusuusnow in habkan loo adeegsado in lagu cusbooneysiiyo T-Mobile G1 ee Mareykanka oo aan laheyn xidid.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » HTC » KU rakib ANDROID 1.6 RASMI RASMI AH OO KU JIRA HTC G1 OO AAN ROOT AH
Maalintii shalay ahayd ayaan cusbooneysiinta ku helay OTA, in kasta oo la furay oo aanan joogin Mareykanka xD
Hispalis Ka Weyn dijo
Ma jiraa qof fikrad ka haya goorta cusbooneysiintu u imaanayso sixirka 'vodafone' ee Isbaanishka?
Jawaab ugu Weyn by Hispalis
Waxaan raacay dhamaan talaabooyinka si aan ugu rakibo cusbooneysiinta cusub ee ku saabsan sixirka 'spain spain'.
Wax walbaa waa saxan yihiin illaa aan u baxo qaabka soo kabashada oo ay ii sheegto:
E: Ma furi karo / kayd / soo kabasho / amar
Waxaan siinayaa Alt + SY ABORT DHISMAHA.
Ma iga caawin kartaa arintan ???
Waxaan u maleynayaa markay tixraacayaan Alt + S inay ula jeedaan kiiboodhka jirka ee G1. Taasi waa u badan tahay sababta aysan kuu shaqeynaynin.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, kugula talin maayo inaad ku rakibto sixirkaaga, maadaama ay u sameeyeen G1, oo leh kalabar Rom of Magic.
mahadsanid ka weyn !!
sikastaba waxaan kuu sheegayaa inaadan ubaahanayn kumbuyuutar.
Si fudud u riix BILAAB + HOME mar kale amarradu waxay la muuqdaan soo gaabintooda xarfaha (tusaale: ku rakibida cusbooneysiinta alt + s)
Waad ku mahadsantahay si kastoo aad u cadeysay.
Waxaan rajeyneynaa inaan si dhakhso leh u hirgelin karno nuqulkan cusub ee sixirka maaddaama runtu ay tahay inay umuuqato inay wax wanaajisay!
Ah aad u wanaagsan Carlos !!! Adiga ayaa naftaada soo ogaaday, ma aanan ogeyn. Waad ku mahadsantahay wadaagida natiijada.
Sikastaba, waan aqriyay in G1 Donut la'aanta barnaamij ay leeyihiin milkiilayaashu inay kala soo baxaan suuqa.
Sidoo kale akhri in T-Mobile UK (Boqortooyada Midowday) ay bilaabi doonto u qaybinta Donut-ka G1 iyo G2 bisha Oktoobar 12. Wax yar ayaa nooga hadhay sixirkeenna, ama ugu yaraan waxaan filayaa sidaas.
Vdd waan quusanahay, waxaan cusbooneysiiyay cusbooneysiinta maxaa yeelay waxay ku timid taleefankayga kaligiis, laakiin waxay bilowday inay qaladaad saafi ah ka sameyso wax walba oo muusigga ah, sariirta, markii aan helay msg, xiriirka wifii ee wax walba markaa cel celisku waxba ma tarin oo waxaan dib uga bilaabay wershadii hadana waxaan rabaa inaan ka soo galo xisaabteyda gmail mana ii oggolaan doonto inay ii sheegto in jabku uusan taageerin xogta ama dhibaato ku meel gaar ah ... ee vdd anigana mar hore ayaan quusanayaa, waa ii oggolaan maayo inaan telefoonka galo ... i caawi, e-maylkayguna waa ...
Ku jawaab Hugox
Waxay ii soo baxday inaan helay nooca OTA laakiin kuma rakibin taleefanka, haddii soo dejintu markay soo degsashadu dhammaato ay dhigeyso xaqiijin waxayna dib ugu laabanaysaa 0 iyadoo leh ikhtiyaar ah inaad mar labaad soo dejiso iyo wixii la mid ah. waa maxay sababtu
Waxaan sidoo kale isku dayay inaan ku rakibo gacanta anigoo raacaya talaabooyinka halkan oo ay ku dhicineyso hawlgalka. Wax saxiix ah iima dhigeyso (302 faylal ah) hoosta ayaan ku guuldareystay xaqiijinta.
Haye, waxaan la mid ahay dhibaatada Carlos, taleefankayga waa HTC T-Mobile G1… markii aan ku xiro habka soo kabashada waxay i siisaa qalad Ma furi karo / kayd / dib u soo kabasho / amar iyo markaan u diro inaan cusbooneysiiyo qalad ayuu i siiyaa: Abor khadka 2… maxaan sameyn karaa ??? Waxaan raacayay tillaabooyinka qoraal kale si aan ugu rakibo barnaamijyada SD-ga waxaan hoos ugu dhigay nooca ilaa 1.0 laakiin telnetku aniga ima shaqeynayo iminkana waxaan rabaa inaan ku laabto nooca 1.6 ee aan markii hore lahaa. FADLAN CAAWIMAADA DEG DEG AH….
Ku jawaab al3x
Waxaan hayaa HTC Dream quful leh Android 1.0. Sideen ugu cusbooneysiin karaa 1.6? Maaha taleefan wax lagu qoro sidaa sameynta sida aad ku xustay qoraalkan ma shaqeynayo.
Ku jawaab Yael
Waxaan haystaa g1 laakiin cusbooneysiinta donutku ma imaan, sidee ayaan ku helaa inay timaado, waxaan hayaa in kabadan hal bil
Ku jawaab tw
Salaan. Waxaan rabaa caawimaad. Waxaan sameeyaa talaabooyinka ii sheegaya inaan cusbooneysiiyo G1-ga aan dhigay 1.0 laakiin waxaan rabaa inaan ku laabto cupcake 1.5 Waan qaadaa dhamaan talaabooyinka laakiin waxay ii sheegaysaa inaysan ka heli karin cusbooneysiinta SD-kayga. Maxaan khaldamayaa I caawi
Ku jawaab brayhanrd
Tavo VR dijo
Qof haysta faylkan si uu u soo raro fadlan! Waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo 1.5 ama 1.6 waxkastoo ay yihiin 🙂
Ku jawaab Tavo VR
Cezar A Arieta L dijo
Si toos ah kama socon kartid 1.0 ilaa 1.6, waa inaad marka hore tagtaa 1.5, soo degsashada waxaa laga heli karaa bogga horumarinta ee koodhka google
Ku jawaab Cezar A Arrieta L
william alvarez dijo
Sideen ku helaa 1.5 ka dibna aan ugu hagaajiyaa 1.6? caawi fadlan
Jawaab william alvarez